Kacha mma elu Organic 100% Skin Care Natural dị ọcha Rose mmanụ ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | HaiRui
elu mma Organic 100% Skin Care Natural dị ọcha Mmanụ Rose
Karama, DRUM, Glass akpa
Mmiri na-acha odo odo na-acha odo odo karịa 20 Celsius c
185.00 Celsius F
Ike ndọda Specific @ 20 Celsius c:
Ndepụta Refractive @ 20 Celsius c:
Optical adiana @ 20 ° c:
-5 Celsius ~ -1,8 Celsius
Soluble na ethanol
16% nke citronellol na 33% nke geraniol
acha odo odo
1000 Kilogram / kilogram kwa ọnwa
1 Net Wt. nke 50KGS / 180KGS na galọn GI Drums 2 Ahịa Ahịa na Akara Akara na Bipute 3 Pụrụ Iche Alumiunm Bottle nke Small Order qty 1kg, 2kg, 5kg
HaiRui Natural Rose mmanụ (Rose Otto Mmanụ) CAS Nke 8007-01-0
Ọdịdị Mmiri na-acha odo odo na-acha odo odo karịa 20 Celsius c
Nnukwu mpo @ 20 Celsius c 0.848 ~ 0.880
Ndepụta Refract @ 20 Celsius c 1.4520 ~ 1.4700
Optical adiana @ 20 ° c -5 Celsius ~ -1,8 Celsius
Solubility soluble na ethanol
Ọdịnaya 16% nke citronellol na 33% nke geraniol
Mmanụ Mmanụ Eke (Rose Otto Mmanụ) …………………………………………………………………
Mmanụ Rose, nke pụtara ma bilie otto (attar nke rose, attar nke Roses), bụ mkpa mmanụ ewepụtara na petals nke dị iche iche bilie.
A na-amịpụta ottos site na uzuoku uzuoku, mgbe bilitere oke na-enwetara site na mgbaze mmanụ ma ọ bụ mmịpụta carbon dioxide dị oke mkpa, na-eji oke zuru oke karịa senti.
Ọbụna jiri ọnụ ahịa ha dị elu na ọbịbịa nke njikọ njikọ, mmanụ rose nwere ike ịbụ mmanụ a na-ejikarị eme mmanụ na mmanụ otite.
Ngwa ……………………………………………………………………………………………… ..
A na-eji mmanụ Rose eme ihe n'ụzọ dị jụụ ma bulie ya elu. Ọ bụ mgbochi mkpali, jụrụ na obi, na dị ka ndị dị otú ahụ bara uru maka akọrọ, na-ekpo ọkụ, na-afụ ọkụ ma ọ bụ na-eme ka akpụkpọ ahụ na ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ na-afụ ụfụ, dị ka conjunctivitis (ọ bụ ezie na ọ ga-abụ mmiri dị elu karịa mmanụ eji maka nke a) .
Na mgbakwunye, rose magburu onwe ya maka ịkọ ụfụ, ịgwọ capillaries gbawara agbawa na maka ụdị anụ ahụ tozuru oke. Ihe ndị na-eme ka obi jụrụ ma na-eme ka obi dị jụụ magburu onwe ya maka ịgwọ ọnọdụ metụtara nrụgide n'etiti ndị okenye na ụmụaka.
E gosipụtakwala mmanụ mmanụ nwere ihe ndị na-akpata antimicrobial. Ke kiet ke otu laabu ọmụmụ Damask bilitere gosiri antibacterial ọrụ megideStradị nje nje 15.
Nchegbu na nchekasị
Na a2009 ọmụmụnke ndị ọrụ afọ ofufo dị mma 40, rose mmanụ etinyere na akpụkpọ ahụ mepụtara nzaghachi ntụrụndụ dị ukwuu karịa nke mmanụ placebo. Ndị natara mmanụ nwere oke iku ume na ọbara mgbali elu karịa ndị natara placebo ahụ.
Na mbụọmụmụ anụmanụ, nke e bipụtara na 2004, inhalation nke mmanụ rose iji belata nchekasị na otu oke.
Ọkpụkpụ oge nsọ
Topical etinyere rose mmanụ (jikọtara ya na mmanụ ndị ọzọ) nwekwara ike ịdị irè na mbenata ịhụ nsọ cramps, dị ka a2006 ọmụmụ ụmụ akwụkwọ kọleji 67. N'ime ọmụmụ ihe a, agwakọtara ngwakọta nwere otu ndapụ nke rose, tụlee abụọ nke lavender, otu tụlee nke clary sage, na 5 cc nke almọnd mmanụ n'ụdị afọ ịhịa aka n'ahụ.
N'ihi naa 2008 ọmụmụ nke 52 menopausal inyom, ndị na-eme nchọpụta nyere ọkara ụmụ nwanyị ahụ ịhịa aka kwa izu na ọtụtụ mmanụ dị mkpa (gụnyere lavender na mmanụ jasmine na mgbakwunye na rose na rose geranium mmanụ) na ọkara na enweghị ọgwụgwọ. Mgbe izu 8 gachara, ụmụ nwanyị ndị natara ịhịa aka kọọrọ mmụba ka ukwuu na mgbaàmà nke menopausal (dị ka ọkụ ọkụ) karịa ndị na-adịghị ịhịa aka.
Ma ị na-eji ya maka otu ọnọdụ ahụ ike ma ọ bụ na ị na-eji ya naanị n'ihi na ị hụrụ ihe na-ewuli elu, ísì ụtọ na ifuru ịhụnanya na-adịgide adịgide, rose bụ otu n'ime mmanụ anyị dị ezigbo mkpa.
1. Obere iwu 20G, 50G, 100G dị
2. Mpi price na magburu onwe mgbe-ire ọrụ
3. supplylọ ọrụ mmepụta ihe
4. Mmanụ Mmanụ Eke
Ihe onwunwe: Rose
Rose Mkpa mmanụ
Rose Mmanụ N'ihi Skin
Anụmanụ Mmanụ Na-esi Ike
mmanụ ukpa mmanụ
Omenala ogwu ndi China 100% ezigbo angelica ...
elu àgwà Southernwood Pharmaceutical mezuwo ...
Factory price nri ịchọ mma ọkwa geranium esse ...
Pure Natural Zedoary Turmeric Oil Mkpa Mmanụ